Ciidamada Ahlu Sunna iyo maleeshiyaad hubaysan oo dagaal kula wareegay Godinlabe – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Ahlu Sunna iyo maleeshiyaad hubaysan oo dagaal kula wareegay Godinlabe
Wararka ka imaanaya Deegaanka Godinlabe oo ka tirsan Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya ciidamada Ahlu Sunna iyo maleeshiyaad hubaysan inay la wareegeen gacan ku haynta Deegaankaasi.
Dagaalkan ayaa markii hore wuxuu dhexmaray ciidamada Maamulka Galmudug iyo Maleeshiyaadka hubaysan, hayeeshe dagaalka waxaa ku biiray markii dambe ciidamada Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe.
Ciidanka Ahlu Sunna ayaa ka baxay Deegaanka Maraarguur iyaga oo wata gaadiid dagaal oo fara badan, waxaana ay gaareen deegaanka Godinlabe oo ay ku caawiyeen Maleeshiyaadkii hubaysnaa ee ciidanka Galmudug la dagaalamayaay.
Afhayeenka Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe Mursal Sheekh Maxamed Xeefow, ayaa sheegay dagaalkaasi inay ku qabsadeen Maxaabiis ka tirsan ciidanka Galmudug.
Xeefow oo adeegsanaya erayga ah ” Shabaab ayaa na soo weeraray” ayaa wuxuu sheegay hada deegaanka Godinlabe inay ku sugan yihiin ciidamada Ahlu Sunna iyo Dadka deegaanka.
Ciidankii Nabad Suggida ee Galmudug ee laga saaray deegaankaasi ayaa u ruqaansaday dhanka Cadaado, waxaana suuragal ah dagaal rogaal celis ah inay soo qaadaan.
Khasaaraha ka dhashay dagaalkaan ilaa hada lama oga inta uu la eeg yahay.
Dadkii ka barakacay Magaalada Gaalkacyo oo dhibaato la soo deristay
Xildhibaanada HirShabeele oo maanta dhageysanaya waxqabadka musharixiinta baarlamaanka